Nitohy ny hetsiky ny mpianatra teny Ankatso : zandary iray naratra, mpianatra roa voasambotra | NewsMada
Nitohy ny hetsiky ny mpianatra teny Ankatso : zandary iray naratra, mpianatra roa voasambotra
Par Taratra sur 18/05/2017
Nitohy, omaly, ny hetsiky ny mpianatra teny Ankatso ary nahery vaika kokoa noho ny teo aloha izany. Zandary lietna iray, naratra voatora-bato ary nisy mpianatra hafa ihany koa naratra. Nisambotra ny zandary nanomboka teo…
Tora-bato nirara-kopana no nitranga teny an-toerana nanomboka tamin’ny 12 ora teo, ary novalin’ny mpitandro filaminana tamin’ny baomba mandatsa-dranomaso. Vokany, zandary iray mitondra ny grady lietna no naratra voatora-bato tamin’izany. Nisy ihany koa ny mpianatra iray tsy nandray anjara tamin’ny hetsika naratra vokatry ny korontana.
Maromaro ny zavatra simba vokatry ny toraka teny an-toerana. Tapitra nikatona avokoa ny mpivarotra ary niala teo amin’ny fiantsonana ny taxi-be. Vokatr’izany, somary nahery vaika ihany koa ny hetsiky ny Emmo/Reg, ka niroso tamin’ny fisamborana ireo mpanao fihetsiketsehana ry zareo.
Nifanao fangalam-piery ny roa tonta ka raha vao nandroso ny mpitandro filaminana, niverina nitsoaka tany anatin’ny faritry ny oniversite ireo mpianatra. Nisy noho izany ny fidiran’ireo Emmo/Reg tany anatin’ny faritry ny oniversite na tsy nisy aza ny fanokafana ny fahaleovan-tenan’ny oniversite. Efa tamin’ny 2 ora tany vao nisy iray voasambotra tamin’ireo mpanao fihetsiketsehana. Nanomboka tonitony ireo mpianatra taorian’izay.
Nosavain’ny mpitandro filaminana izay mpianatra tovolahy nikasa hody, ka nisy 12 lahy ireo no voatana, ka ny iray no nosamborina nalefa tao anaty fiara 4×4.
Nilaza ny lehiben’ny CIRGN, ny jeneraly Andrianjanaka Njatoarisoa fa hametrahana fanontaniana ireo mpianatra ireo ary avotsotra avy eo. “Tsy ekena ny fanakorontanana sy fanimbana fananan’olona ka izany no antony hidinanay ety”, hoy ny fanazavana.
Tsy nalana ny fahaleovantenan’ny oniversite
Nanamafy ny tale kabinetran’ny fitantanana ny oniversite, fa tsy noesorina akory ny fahaleovantenan’ny oniversite fa nisy kosa ny fifanarahana teo amin’ny fitantanana ny oniversite sy ny mpitandro filaminana mba nahafahana namehy ny mpianatra tsy hanimba zavatra. Amin’ny trangan-javatra toy izao, hoy ny fanazavana, mety misy ny mpianatra iharan’ny sazy na ny Codis, indrindra ireo fantatra fa manakorontana na mitarika korontana. “Azo atao tsara izany, ary misy fiantraikany avy hatrany amin’ireo mpianatra manao izany. Misy ihany amin’ireo mpanao fihetsiketsehana izay tsy mpianatra fa mpikarama an’ady, izay misy foana rehefa misy ny hetsiky ny mpianatra”, hoy ny fanazavana.
Midika izany teny izany fa misy ny ambadika politika amin’ny fitakian’ny mpianatra. Fitakiana izay nambaran’ny tale kabinetra eny Ankatso fa niainga tamin’ny fahafahan’ny mpianatra mampiasa internet malalaka. “Niitatra tamin’ny resaka vatsim-pianarana izany ary izao miafara amin’ny fanakorontanana izao”, hoy ny fanazavana. Omaly, nisy ny mpianatra tao amin’ny sosiolojia nanao fitokonana noho ny tsy fisian’ny efitra ianaran’izy ireo. Mifamahofaho teo izany ary mifandrirotra lasa hetsiky ny mpianatra rehetra. Efa tamin’ny 4 ora hariva vao niverina tamin’ny laoniny ny filaminana teny Ankatso. Efa nisy rahateo ny fifanantonan’ny mpitarika ny mpianatra sy ny avy amin’ny minisitera andanin’izany.
Yves S / Sary : Fanou